Dal wuxuu horumaraa markuu luqadiisa isticmaalayo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dal wuxuu horumaraa markuu luqadiisa isticmaalayo
Markii dawladii dhexe si fudud dalka gacanta ugu gelisay qawlasatadii reer galbeedka iyo dawladaha jaarka wateen, waxa dalak ku yimi burbur aad u xoogan oo ilaa hadda uu ka soo kaban la’yahay. Inkastoo ay jireen maamulo la dhisay haddana marnaba laguma tilmaami karin dawlad.
Af-Somaliga oo dawladii dhexe ku guulaysatay inay qorto wuxuu dadka iyo dalka u noqday meel ay ka hormari karaan. Waxase jirey mudooyinkii dambe in afkaas uu waayay u hiilin oo marka kalmad cusub la keenaba lagu barto afkii qalaad ee ay ku timi.
Waxa nasiib daro ah in madaxda qaar halkii ay Af-Somali ay dadkooda wax ugu sheegi lahaayeen ay boqolkiiba 80 isticmaalaan af-qalaad. Waxaad arkaysaa ayagoo kalmada qaar ku sharaxaya af-qalaad waana nasiib daro ayuu yiri Cali Calasow.
Afka loo hiiliyo waxa ku jira horumarka, waxana muhiima in isbedelka yar ee soo kordhay looga faaiideysto in kalmaha muhiimka oo dhan lagu bedelo Af-Somali.